ILYINSKY BARADHADA KALA DUWAN: SHARAXAAD, ASTAAMO IYO SAWIRRO - BEER CAGAARAN
Dhadhanka wanaagsan iyo dhalidda sare - baradho "Ilinsky": sharaxaada kala duwan, astaamaha, sawirrada
Haddii aad doorbiddo noocyo hore oo baradho ah, u fiirso Ilinsky.
Waa mid aad u qiimeeya by bannaanka u dhalidda leh degan deggan, dhadhanka fiican iyo tayada ganacsi wanaagsan.
Faahfaahin faahfaahsan ee kala duwan, sifooyinka ugu muhiimsan iyo sifooyinka beerashada waxaa laga heli karaa maqaalkan.
Waxa kale oo aad baran doontaa cudurrada ay u nugul yihiin oo ay saameeyaan cayayaanka.
Baraf Ilyinsky sifeynta kala duwan
Magaca dugsiga Ilinsky
Sifooyinka guud dhexdhexaadinta hore ee dhaqanka Ruushka, oo lagu garto suuqgeyn aad u sarreeya
Mawduucyada Starching 16-18%
Dad badan oo digriiga ganacsiga ah 50-160 g
Tirada digriiga duurka 8-13
Yield 180-350 c / ha
Tayada macaamilka dhadhan fiican, ku habboon cunto karinta wax kasta oo suxuun leh
Soo kabashada 93%
Gobollada la doorbido Central Black Earth, Volga Dhexe
Cadaadiska cudurada u nugul nematode cyst dahabka
Asalka Machadka GNU ee Baradhada Beeraha. A.G. Lorch
Ilyinsky ayaa iska leh noocyo baradho hore-baradho ah, taniyo waxay ka qaadataa 70 illaa 90 maalmood laga bilaabo biqilka ilaa bislaanshaha farsamada. Waxaa lagu daray Diiwaanka Gobolka ee Ruushka ee Gobolka Central Cayil, sidoo kale waxaa loo qaybiyey Ukraine iyo Moldova. Laga soo bilaabo hal hektar oo ah beerto, sida caadiga ah laga bilaabo 180 ilaa 350 mitir oo ah baradhadaas ayaa la goostay.
Baradhada Ilyinsky si fiican ayaa loo hayaa. Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan wakhtiga iyo heerkulka, dhibaatooyinka suurtagalka ah ee walxaha shakhsiyeed ee goobta. Iyo sidoo kale ku saabsan sida loo keydiyo xididdada jiilaalka, in joodariyeyaasha, on balakoonka, qaboojiyaha, diiray.
Fasalkan oo lagu garto dhadhan wanaagsan. Waxay leedahay ujeedo miis ah, waxay u dulqaadataa abaarta iyo heerkul sarreeya. Waxaa lagama maarmaan ah in la koro khudradani dhulka banaan. Inta ugu badan ee ku haboon isaga waa carradu kaas oo dilka ah ama cawska sanadlaha ah, jiilaalka iyo miraha miraha, iyo jilcsan ayaa la koray. Waxaad ku beeri kartaa baradho sida carrada ciidda, halkaas oo lupin horey u koray.
Waxay muujinaysaa iska caabin xoog leh oo waxyeelo leh iyo kansarka baradhada, si kastaba ha ahaatee, waxay u nugul tahay duufaanta goosgooska iyo nematode dahabka ah ee baradhada.
Dhirta xayawaanka Ilinsky waxay ku kala duwan yihiin celceliska celceliska. Dhirta cagaaran ee dhirta ah waxaa lagu daboolaa caleemo cagaaran oo dhexdhexaad ah oo leh dabaqyo hoose ama mid yar. Wixii dhirtaas waxaa lagu gartaa inflorescences yaryar iyo corollas midabka midabka midabka casaan-guduud ah. Dalagga aasaasiga ah ee kala duwan ee baradhada ayaa ah oval-qaabeeya. Waxaa lagu daboolaa maqaarka cas ee cas, oo hoos ku yaala hilibka cad.
Wixii dalagyada xididadan waxaa lagu gartaa celceliska qoto dheer ee indhaha. Celceliska miisaanka ee tuber waa laga bilaabo 54 ilaa 158 garaam, iyo contentchest ee waa at heerka of 15.7-18.0%. Tirada digriiga ee baadiyaha - 8-13 pcs.
Ilinsky 8-13 gogo '
Asalka iyo astaamaha sii kordhaya
Baradhada Ilinsky waxaa lagu dhaliyey Ruushka sannadkii 1999. Bannaaneynta baradho ah Ilinsky sida caadiga ah lagu sameeyo May. Masaafada u dhaxaysa dhirta waa inay ahaataa 60 sentimitir, iyo inta u dhaxeysa saf - 35 sentimitir. Cawska waa in si joogto ah loo daboolaa oo daboolaa caleemaha si loo ilaaliyo muuqaalka, mulching waxaa loo isticmaali karaa.
Ku saabsan sida loo abaabulo waraabinta saxda ah iyo soo saaro baradhada qoyan, akhriso maqaallada shakhsiga ah.
Agrotechnology ee baradho iyo hababka helitaanka goosashada wanaagsan waxay noqon kartaa mid aad uga duwan.
On our site waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan baradho sii kordhaya. Marka lagu daro hababka noocan oo kale ah: bacaha iyo foostooyinka, cawska iyo sanduuqyada, iyo sidoo kale dhamaanba tiknoolajiyada Dutchka.
Sidoo kale akhri wax ku saabsan helitaanka dalagga iyada oo aan la jarin iyo hilling, ku saabsan sida loo koro noocyo hore iyo sida loo sameeyo miraha.
Fiiri sawirka: baradhada abuurka baradhada Ilinsky
Cuntooto baradho ah Ilinsky waa mid u nugul cudurrada sida cirridka dambe iyo nematode dahab ah oo dahab ah. Calaamadaha ugu muhiimsan ee dabaysha goor dambe waa mugdi madow oo marka hore muuqan doona caleemaha, ka dibna qaybaha kale ee geedka.
Cudurkaan waa mid aan la daweyn Karin, laakiin waxaa looga hortagi karaa iyadoo la isticmaalayo buufinta ka hortagga dhirta oo leh xalka maadada buluuga ah, sulfate copper, manganese ama Bordeaux isku dar ah. Haddii barafku horayba u qaadsiiyay, daawooyinka sida Oxyhom, Ridomil Gold MC iyo Ridomil MC waxay gacan ka geysaneysaa in la daahiyo faafitaanka dabaylo goor dambe.
Calaamadaha ugu muhiimsan ee faafidda nematode baradho waxaa ka mid ah koritaanka dhirta oo gaabis ah, qalajinta iyo jaalaha ah caleemaha hoose. Digriiga waxay noqdaan kuwo yaryar, iyo nidaamka xididka ayaa leh muuqaal shredded ah. Si loola dagaallamo cayayaankan, waxaad isticmaali kartaa daroogada sida Thunderbolt 1, Thunderbolt 2 iyo Medvedtox U.
Akhri sidoo kale cudurada sida badan ee Solanaceae, sida Alternaria, Fusarium, Verticillis, qolof.
Baradhada Ilinsky waxaa loola jeedaa waqtiga la xaqiijiyay noocyo lagu kalsoonaan karo waxayna ku faantaa caan wayn oo ka mid ah bannaanka guriga, iyo mid ka mid ah growers qudaarta ee ku dhow dibadda. Waxaa lagu kori karaa iibka iyo isticmaalka shakhsiyeed.
Ka jawaab celinta bacriminta. On our site waxaad ka heli doontaa macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida loo abuuro baradho, goorta iyo sida loo dalbado bacrimin, sida loo sameeyo marka la beero.
Intaa waxaa dheer in Bacriminta ee beerista baradho badanaa loo isticmaalo, iyo daroogooyinka kale iyo kiimikooyinka.
Waxaan kuu soo bandhigaynaa maqaal wax ku ool ah oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo khatarta fungicides iyo herbicides.